जथाभावी सवारी साधन रोके तत्काल एक हजार जरिवाना
काठमाडौं, १ माघ । बस बिसौनीबाहेक अन्य ठाँउमा सवारी रोके ट्राफिक प्रहरीले एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने भएको छ । सवारीसाधन मात्र होइन, यात्रुलाई पनि कारबाही गरिने ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । पहिलो चरणमा...
राजश्व अनुसन्धान विभागबाट श्रम जान मानेनन् सुवेदी
काठमाडौं, १ माघ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय, सामान्य र अर्थ मन्त्रालयको आदेश भए पनि सहसचिव भरत सुवेदीले राजस्व अनुसन्धान विभागको उपमहानिर्देशकबाट श्रम मन्त्रालयमा फिर्ता हुन अस्वीकार गरेका छन् । श्रम मन्त्रालयले पठाएको काजका आधारमा सुवेदी...
प्रदीप र पवर्तकै अल्सनाको दोस्रो विहेको दृश्य !
काठमाडौं, ३० पुस । अघिपछि जस्तै मंगलबार पनि कास्की जिल्ला अदालतमा विभिन्न् मुद्धाका वादी प्रतिवादीहरु फैसला वा आदेशको प्रतीक्षामा थिए । उनीहरुकै बीचबाट एक जोडी युवायुपवती हातमा माला लिएर उभिए । अदालतका कर्मचारी, कानुन...
जुनियर प्रहरीका लागि आवास बन्दै, २ सय ७८ लाई मासिक निवृत्तिभरण
काठमाडौं, ३० पुस। अवकाश पाउन लागेका प्रहरीलाई खुसीको खबर छ । अवकाशपछि पनि विभिन्न पेसा र व्यवसायमा आबद्ध हुन सहयोग पुग्ने गरी प्रहरी संगठनले निस्शुल्क तालिम दिने भएको छ । अवकाश पाउन लागेका कर्मचारीलाई...
कहिले आउँछ कक्षा एघारको नतिजा ? उत्तरबिहीन माध्यामिक शिक्षा परिषद
काठमाडौं, ३० पुस । परीक्षा सञ्चालन भएको झन्डै १० महिनासम्म पनि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले कक्षा ११ को नतिजा प्रकाशित गर्न सकेको छैन । गत १ जेठदेखि १२ जेठसम्म कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन...
पशुपतिनाथस्थित आर्यघाटमा शव जलाउनेहरू आन्दोलित !
काठमाडौं, ३० पुस । काठमाडौं पुस पशुपति क्षेत्र विकास कोषका घाट सेवाका कर्मचाीले मंगलबारदेखि अनिश्चितकालिन शव जलाउने काम रोकेका छन् । कर्मचारीले सेवा सुविधालगायतका ९ बुँदे माग राखेर काम रोकेपछि मलामी आफैले शव जलाएका...
कहाँबाट सञ्चालित छन् देउवा ! किन फरक प्रस्ताव गर्छन् ?
काठमाडौ, ३० पुस । कांग्रेस वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानका विवादित बिषयमा सहमति हुने सम्भावना नदेखिएपछि अन्तरिम संविधानलाई नै पूर्ण संविधानको रुपमा जारी गर्ने विकल्पलाई पार्टीभित्र र बाहिर छलफलको विषय बनाउने भएका...
फुटबलका १३ खेलाडीलाई १६ लाख रुपियाँ !
काठमाडौं, २८ पुस । विदेशमा व्यावसायिक फुटबल लिगमा स्टार खेलाडी अनुबन्धन गर्न क्लबहरूबीच तँछाडमछाड भए पनि नेपालमा यसबारे विरलै क्लबबीच रस्साकस्सी चल्छ। नेपालमा राष्ट्रिय लिग सुरु हुन १० दिनमात्र बाँकी छँदा विदेशमा जस्तै रस्साकस्सी...
ईपीएस भाषा परीक्षा पास गर्ने सबै कोरिया जान पाउने
काठमाडौं, २८ पुस । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) भाषा परीक्षा पास गरी बसेका सबै नेपाली युवा कोरिया जान पाउने भएका छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सन् २०१५ जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म छ हजार चार सय...
४२ सहसचिवमध्येबाट १६ जना सचिवमा बढुवा
काठमाडौं, २८ पुस । बढुवा समितिले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा रिक्त १६ सचिवमा पदोन्नतिका लागि ४२ सहसचिवको नाम सिफारिस गरेको छ । लोकसेवा आयोगकी अध्यक्ष कयोंदेवी यमीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बढुवा समितिको बैठकले पाँच...
पैसा उठाएर गुरुकुल नेशनल उच्च माविका सञ्चालक फरार
काठमाडौं, २८ पुस । तीन वर्षअघि राजधानीमा खुलेको एउटा कलेजका सञ्चालक विद्यार्थीको पैसा उठाएर भागेपछि विद्यर्थी बिचल्लीमा परेका छन् । गौशालामा रहेको पिरामिड कलेज खरिद गरेर नाम परिर्वतन गरी गुरुकुल नेशनल उच्च माविका सञ्चालक...
अर्बपति शेष घले भन्छन्– ‘कुनै बेला रेस्टुरेन्टमा काम गर्दा दुब्लाएर लखतरान भएका थियौँ’
एक अर्ब रुपैयाँको कोष खडा गरेर समाजसेवा गर्ने मन त धेरैलाई होला, तर त्यति ठूलो हैसियत कमैको छ । तपार्इं लमजुङको विकट गाउँमा हुर्किएको एक नेपाली, यति ठूलो हैसियत कसरी बनाउनुभयो ? म आफूलाई...
« 1 … 1,195 1,196 1,197 1,198 1,199 … 1,312 »
गोकुल बास्कोटा भन्छन्– सचिवले भ्रष्टाचार आरोप लगाउँदा बिना मगरले किन राजीनामा नदिएको ?
डडेल्धुरामा कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सर्वदलीय प्रतिवद्धता
काठमाडौंमा रहेका भोजपुरेहरूलाई पाइलट श्रेष्ठद्वारा राहत वितरण
नेपाली सेनामा भ्रष्टाचार : तीन तारे तानिए, चार तारे कता हानिए ?
लक डाउनकै बेला शिव सेना नेपालले राँके जुलुस प्रदर्शन गर्नुको गुह्य कारण
राजपाको ‘हर्कत’ले उपेन्द्र–बाबुराम झस्किए, भाँडिने अवस्थामा पुग्यो एकता
अतिक्रमित भूमिलाई लिएर अमेरिकामा नासाद्वारा भारतको बिरोध
सीमा नाका र हवाइ उडान असार १६ गतेसम्म बन्द